Mkpanaka Carbide, Carbide Cement, Cebide Strip - Toonney
Isiokwu Isi Die
Dị ka onye nrụpụta ọkachamara nke ụlọ ọrụ Metallurgy Powder, ngwaahịa anyị gụnyere mkpanaka carbide tungsten, tungsten carbide na -aga isi ihe na -anwụ anwụ, tungsten carbide endmills na ụdị ngwa ọrụ igwe.
Ụfọdụ gbasara ụlọ ọrụ anyị
AKWỤKWỌ AKWUKWU N'IHI 20000M2
Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na nyocha, ịzụlite na imepụta ngwaahịa carbide tungsten. Ụlọ ọrụ Toonney dị na Xiamen, obodo gbara osimiri okirikiri na Fujian Province na China, obodo ama ama maka ụlọ nrụpụta carbide tungsten kacha elu. Toonney Carbide Bar Plant nwere ụlọ ọrụ nke na -ekpuchi mpaghara ihe dị ka square mita 8,000, ngụkọta nke ala 3, nwere ahịrị mmepụta teknụzụ ọkwa ọhụụ, nwere ike nweta ngwaahịa carbide tungsten siri ike dị ka mkpanaka carbide tungsten, rụọ, carbide oghere wdg. tungsten carbide na cobalt ntụ ntụ.
Ịdị mma nke taa bụ iduga n'ahịa echi.
Nkwado ihe ọhụrụ, kwanyere ihe ọmụma ùgwù.
Afọ ojuju ndị ahịa bụ naanị akara maka ọrụ anyị.
Onye isi na -emepụta ngwaahịa carbide tungsten